मकै, गहुँ छाडेर जडीबुटी खेती तिर लम्किदै » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मकै, गहुँ छाडेर जडीबुटी खेती तिर लम्किदै
सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १३:२५ मा प्रकाशित !
नेपालगञ्ज, जेठ २२ गते । राम्रो उत्पादन र आम्दानी हुन थालेपछि बाँकेको शम्सेरगञ्ज, महादेवपुरी र चिसापानीका किसान जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गहुँ र मकै लगाउँदा खान नपुग्ने जग्गामा सुगन्धित तेल उत्पादन गर्ने जडीबुटी लगाएर गाउंँका किसानले राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।
चारवर्ष वर्षयता बाँकेका केही गाउँका जग्गामा मकै र गहुँको खेतीभन्दा जडीबुटी बढी देख्न पाइन्छ । शम्सेरगञ्जमा पाँच वर्षअघि तीन जनाले सुरु गरेको यो खेती अहिले सय जनाभन्दा बढी किसानले सुरु गरेका छन् । गहुंँको सिजनमा यहाँ क्यामोमाइलको खेती देख्न पाइन्छ भने मकैको सिजनमा मेन्था खेती फस्टाउँछ ।
मकै, गहुँलाई मिहिनेत बढी चाहिने तर जडीबुटीका लागि थोरै मेहनतमा बढी मुनाफा पाइने भएपछि यतैतिर लाग्यौँ, शम्सेरगञ्जका किसान सेतुराम चलाउनेले भन्नुभयोे, अहिले जडीबुटीले गाउँलेको जीवनस्तरमा परिवर्तनसमेत ल्याएको छ ।
जङ्गलको बीचमा रहेको शम्सेरगञ्जको बालापुरमा जताततै क्यामोमाइलकै खेती गरिएको देख्न सकिन्छ । धनियाजस्तो बोट देखिने क्यामोमाइलले एक सिजनमा तीन पटकसम्म
आम्दानी दिन्छ ।
प्रतिलिटर ३५ हजार रुपियाँ पर्ने क्यामोमाइल र मेन्थाको तेल बेचेर राम्रो आम्दानी हुने भएपछि मकै र गहुँ विस्थापित हुन थालेको हो । २५० घरधुरी रहेको बालापुरमा अहिले ५० बढी परिवारले क्यामोमाइल खेती गरेका छन् । १८ बिघा जमिनमा लगाइएको क्यामोमाइलले ती परिवारको आर्थिक स्थिति सुधारेको छ । गहुँले भन्दा तीन गुना बढी आम्दानी क्यामोमाइलले हुने भएकाले गहुँ लगाएका किसानले पनि यो लगाउन थालेको बालापुरका तप्त खत्रीले बताउनुभयो ।
जङ्गलमा हुने लेमनग्रास, सिट्रोनेला, असारे, युकालिप्टस् जस्ता घाँसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने जानेका गाउँलेले त्यसको सदुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
भारतमा तालिम लिएर आएपछि यस्तो जुक्ति जानेका शमसेरगञ्जका ११ सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति मिलेर १६ लाख रुपियाँमा तेल प्रशोधन गर्ने मेसिनसमेत जडान गरेका छन् । यहाँबाट उत्पादित तेल काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, कृष्णनगर र वीरगञ्जका ठूला व्यापारीले विदेश पठाउने गरेका छन् ।
गाउँ र जङ्गलमा उत्पादन हुने जडीबुटी बेच्न बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने नभएकाले पनि गाउँले यो खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । तेल प्रशोधन गर्ने मेसिनसमेत ल्याएर व्यावसायिक रूपमा जडीबुटीतर्फ लागेका यहाँका किसानको सिको गर्दै बाँकेका अन्यत्र गाउँमा समेत यो खेती फस्टाएको छ ।
जडीबुटीकै खेतीबाट बाँके चिसापानीका महिला आत्मनिर्भर बनेका छन् । चिसापानीका विपन्न महिलाको जीवनस्तर उकास्न जङ्गलको घाँस मुख्य माध्यम बनेको छ । सामुदायिक वनमा लगाइएको लेमनग्रास बेचेर चिसापानीका महिलाको जीवनस्तरमा राम्रै परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।
घाँस दाउरा गर्न जाने जङ्गलबाटै राम्रो आम्दानी लिन सिकेका उनीहरूले यो बिक्री गरेरै बालबच्चाको पढाइ खर्च र घरखर्च चलाउन थालेका छन् । श्रीमान् विदेश गएका छन् आवश्यक परेको बेलामा एक पैसा कसैले सघाउंँदैन तर लेमनग्रास रोप्न थालेपछि कसैसँग हात थाप्न परेको छैन, चिसापानीकी कोकिला चौधरीले भन्नुभयो, अरू महिलालाई अप्ठेरो प¥यो भने गर्जो टार्ने गरेका छौँ ।
घाँसको व्यापार गर्न गाउँभरिका महिला समूहमा आबद्ध भएका छन् । सामूहिक कामले उनीहरूको क्षमता विकासमा पनि सहयोग पु¥याएको छ । २० जनाको यो समूहले जङ्गललाई २० भागमा बाँडेको छ ।
उनीहरूले आफ्नो भागमा परेको जमिनमा लेमनग्रास रोपेर नजिकैको प्रशोधन केन्द्रमा लैजाने गरेका छन् । लेमनग्रास सुगन्धित तेल, परफ्युम, लेमन फ्लेवर र हर्वल चियाका लागि प्रयोग हुने गर्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: मृत अवस्थामा फेला पर्यो बेपत्ता किशोर
NEXT POST Next post: एक करोडको लगानीमा पूर्वाधार विस्तार
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १३:२५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १३:२५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १३:२५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १३:२५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ २२, २०७४ १३:२५